၃ ရက်အတွင်း ၁၀ပေါင်ကျစေမယ့် Diet Plan | MyFood Myanmar
၃ ရက်အတွင်း ၁၀ပေါင်ကျစေမယ့် Diet Plan
မင်ျဂလာဆောငျပှဲတှေ အလှူပှဲတှေ နီးလာပွီဆိုတော့ အလငျြအမွနျ ဝိတျကဖြို့ လိုနပွေီလား? ဒါဆိုရငျတော့ ရကျတို Diet Plan လေးတှနေဲ့ အစားအစာတှကေို စနဈတကစြားပွီး ဝိတျခလြိုကျပါ။ အခု ပွောပွမယျ့ Diet Plan ကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှဈမှာ အရမျးခတျေစားခဲ့တဲ့ Military Diet ပါ။ ကမ်ဘာတဈဝှမျးက လူပေါငျးမြားစှာ ပွုလုပျခဲ့ကွပွီး အောငျမွငျခဲ့တဲ့ Diet Plan တဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီ Plan ကို ပုံစံတူ လုပျတဲ့ Plan တှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါကတော့ မူရငျး Diet Plan ပါ။ ဘာကှာခွားခဲဆိုရငျတော့ ကတြဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ မတူပါဘူး။ ကဲ..Diet Plan မလုပျခငျ ဘာတှေ သိသငျ့သလဲ ဆိုတာ အရငျဦးဆုံး ပွောပွပါမယျ။ ပွီးရငျ တဈရကျခငျြး စားရမယျ့ အစီအစဉျတှကေို ရေးသှားမှာပါ။
သငျ Diet လုပျတော့မယျဆိုရငျ ဆရာဝနျရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြ ရယူတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ အခု အကဉျြးခြုပျပွောပွမယျ့ အကွောငျးအရာတှကေို ဖတျပွီး ကိုယျနဲ့ သငျ့တျော မတျော ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပါ။
Diet Plan လုပျတဲ့အခါ မလှယျကူတဲ့ အတှကျ မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ အရာတှေ တှကွေုံ့ရတတျပါတယျ။ ပထမဦးဆုံး Diet Plan အတိုငျး အတိအကြ လိုကျနာပါ။ တဈနကေို့ ကယျလိုရီ တှကျပွီး စားတဲ့ အခါ Plan အတိုငျး မစားဘဲ စိတျမနိုငျလို့ အခွားဟာတှေ စားခဲ့ရငျ ဘာမှမထူးပါဘူး။ ဒီPlan မှာ ပါတဲ့ အစားအစာတှဟော စှမျးအငျတှေ ပေးပွီး အစာခြေ စနဈရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကို ကောငျးကောငျး အလုပျလုပျဖို့ အတှကျ စီစဉျထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အဆီတှကေို ကောငျးကောငျး လောငျကြှမျးစဖေို့ အတှကျ တာဝနျယူပါတယျ။
ပထမဆုံးနေ့ မနကျမှာ ကိုယျရဲ့ အလေးခြိနျကို ခြိနျထားပါ။ ဒါပမေယျ့ သုံးရကျမပွီးခငျအထိတော့ ထပျမခြိနျပါနဲ့။
ကိုယျရဲ့ခါးတှေ လကျတှရေဲ့ အတိုငျးအတာတှကေို မှတျထားပါ။ စိတျကို အကောငျးဆုံွး ပငျဆငျပွီး ပထမနကေို့ စတငျပါ။ အတိအကြ လိုကျနာခဲ့ရငျ ၃ရကျအတှငျးမှာ ၁၀ပေါငျ ကစြပေါတယျ။ အခြို့က ပွောကွပါတယျ ၁၀ထကျ ပိုကတြယျ ၁၀မကဘြူး ၅ပေါငျလောကျပဲ ကတြယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ တဈယောကျနဲ့တ ဈယောကျ အခြိုးအစား ဖှဲ့စညျးပုံ မတူတဲ့ အတှကျ ကတြဲ့အလေးခြိနျဟာလညျး တူညီမှာမ ဟုတျကွောငျး သိထားဖို့ လိုပါတယျ။ သူမြားက အမြားကွီးကပြွီး ကိုယျမကရြငျ စိတျဓာတျမကဖြို့ ကွိုတငျစိတျသှငျးထားပါ။
သတိပွုရမယျ့ အခကျြကတော့ ၃ရကျ စားပွီးရငျတော့ ပုံမှနျအတိုငျးပွနျစားပေးပါ။ အစာအိမျဟာ ကြုံ့သှားတဲ့အတှကျ အမြားကွီး စားမိမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ ဒါလေးကို ဆကျပွီးထိနျးထားရငျ ကိုယျအလေးခြိနျ ထိနျးပွီးသား ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ၃ရကျထကျ ပိုပွီးတော့ Diet Plan ကို မစားပါနဲ့။ ဒီ Plan ကို ပွနျစခငျြတယျဆိုရငျတော့ ၄ရကျခွားပွီးမှ ပွနျစားပေးပါ။ တဈလအတှငျး ၃ရကျစား ၄ရကျနားနဲ့ လုပျပေးမယျဆိုရငျ ပေါငျ ၃၀-၄၀ အတှငျးကနြိုငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အရငျဦးဆုံး ပွောသလို ဆရာဝနျရဲ့ အကွံပွုခကျြကိုတော့ ရယူထားးပါ။
Plan အတှငျး မုနျ့ပဲသရစောတှကေို ပွောထားတဲ့ အတိုငျးပဲ စားပေးပါ။ အခွားအရာတှေ မစားမိပါစနေဲ့။
တဈရကျခငျြး အသေးစိတျကို ဆကျပွီး ရေးသှားပါမယျ။
ဆကျရနျ >>>> ၃ရကျအတှငျး ၁၀ပေါငျကစြမေယျ့ Diet Plan (ပထမရကျ)
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေ အလှူပွဲတွေ နီးလာပြီဆိုတော့ အလျင်အမြန် ၀ိတ်ကျဖို့ လိုနေပြီလား? ဒါဆိုရင်တော့ ရက်တို Diet Plan လေးတွေနဲ့ အစားအစာတွေကို စနစ်တကျစားပြီး ၀ိတ်ချလိုက်ပါ။ အခု ပြောပြမယ့် Diet Plan ကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ အရမ်းခေတ်စားခဲ့တဲ့ Military Diet ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Diet Plan တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Plan ကို ပုံစံတူ လုပ်တဲ့ Plan တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကတော့ မူရင်း Diet Plan ပါ။ ဘာကွာခြားခဲဆိုရင်တော့ ကျတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် မတူပါဘူး။ ကဲ..Diet Plan မလုပ်ခင် ဘာတွေ သိသင့်သလဲ ဆိုတာ အရင်ဦးဆုံး ပြောပြပါမယ်။ ပြီးရင် တစ်ရက်ချင်း စားရမယ့် အစီအစဉ်တွေကို ရေးသွားမှာပါ။
သင် Diet လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် ရယူတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အခု အကျဉ်းချုပ်ပြောပြမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ပြီး ကိုယ်နဲ့ သင့်တော် မတော် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Diet Plan လုပ်တဲ့အခါ မလွယ်ကူတဲ့ အတွက် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာတွေ တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး Diet Plan အတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာပါ။ တစ်နေ့ကို ကယ်လိုရီ တွက်ပြီး စားတဲ့ အခါ Plan အတိုင်း မစားဘဲ စိတ်မနိုင်လို့ အခြားဟာတွေ စားခဲ့ရင် ဘာမှမထူးပါဘူး။ ဒီPlan မှာ ပါတဲ့ အစားအစာတွေဟာ စွမ်းအင်တွေ ပေးပြီး အစာချေ စနစ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကို ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ဖို့ အတွက် စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဆီတွေကို ကောင်းကောင်း လောင်ကျွမ်းစေဖို့ အတွက် တာဝန်ယူပါတယ်။
ပထမဆုံးနေ့ မနက်မှာ ကိုယ်ရဲ့ အလေးချိန်ကို ချိန်ထားပါ။ ဒါပေမယ့် သုံးရက်မပြီးခင်အထိတော့ ထပ်မချိန်ပါနဲ့။
ကိုယ်ရဲ့ခါးတွေ လက်တွေရဲ့ အတိုင်းအတာတွေကို မှတ်ထားပါ။ စိတ်ကို အကောင်းဆုံြး ပင်ဆင်ပြီး ပထမနေ့ကို စတင်ပါ။ အတိအကျ လိုက်နာခဲ့ရင် ၃ရက်အတွင်းမှာ ၁၀ပေါင် ကျစေပါတယ်။ အချို့က ပြောကြပါတယ် ၁၀ထက် ပိုကျတယ် ၁၀မကျဘူး ၅ပေါင်လောက်ပဲ ကျတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တ စ်ယောက် အချိုးအစား ဖွဲ့စည်းပုံ မတူတဲ့ အတွက် ကျတဲ့အလေးချိန်ဟာလည်း တူညီမှာမ ဟုတ်ကြောင်း သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သူများက အများကြီးကျပြီး ကိုယ်မကျရင် စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ ကြိုတင်စိတ်သွင်းထားပါ။
သတိပြုရမယ့် အချက်ကတော့ ၃ရက် စားပြီးရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်စားပေးပါ။ အစာအိမ်ဟာ ကျုံ့သွားတဲ့အတွက် အများကြီး စားမိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါလေးကို ဆက်ပြီးထိန်းထားရင် ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၃ရက်ထက် ပိုပြီးတော့ Diet Plan ကို မစားပါနဲ့။ ဒီ Plan ကို ပြန်စချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၄ရက်ခြားပြီးမှ ပြန်စားပေးပါ။ တစ်လအတွင်း ၃ရက်စား ၄ရက်နားနဲ့ လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ပေါင် ၃၀-၄၀ အတွင်းကျနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အရင်ဦးဆုံး ပြောသလို ဆရာဝန်ရဲ့ အကြံပြုချက်ကိုတော့ ရယူထားးပါ။
Plan အတွင်း မုန့်ပဲသရေစာတွေကို ပြောထားတဲ့ အတိုင်းပဲ စားပေးပါ။ အခြားအရာတွေ မစားမိပါစေနဲ့။
တစ်ရက်ချင်း အသေးစိတ်ကို ဆက်ပြီး ရေးသွားပါမယ်။
ဆက်ရန် >>>> ၃ရက်အတွင်း ၁၀ပေါင်ကျစေမယ့် Diet Plan (ပထမရက်)
MyFood Myanmar2019-11-23T09:43:06+06:30October 9th, 2016|Knowledge, Tips & Stories|